IGarcilaso de la Vega. Iimpawu zakhe ezi-5 zokumkhumbula | Uncwadi lwangoku
IGarcilaso de la Vega, imbongi enkulu yoKuvuselelwa kweSpain, Usweleke ngemini efana nanamhlanje ngo-1536 eNice. Ubomi bakhe, buzele ngamayelenqe omkhosi kunye nempumelelo, ukhuphisana ngokuqaqamba no unqabile kodwa umsebenzi osisiseko kuncwadi lweSpanish. Kwimemori yakhe ndiyahlangula 5 iisonethi zakhe ukukhumbula.
1 IGarcilaso de la Vega
2.1 I-Sonnet V-Isimbo sakho sibhaliwe emphefumlweni wam
2.2 I-Sonnet XIII-Iingalo zikaDaphne zazisele zikhula
2.3 Sonnet IX - Mfazi wam, ukuba andikho kuwe ...
2.4 I-Sonnet VII-Ngubani ophulukene kakhulu nokuphulukana ...
2.5 I-Sonnet XIV-Njengomama onethenda, ukuba ukubandezeleka ...
IGarcilaso de la Vega
Wazalelwa ngaphakathi Toledo, kwiintsapho ezintle zaseCastilian. Ukususela ebutsheni bakhe, wathabatha inxaxheba ngamayelenqe kwezopolitiko Castile de 1510 wangena kwinkundla kaKing Charles I. Uthathe inxaxheba kwiimfazwe ezininzi zomkhosi nezopolitiko kwaye uthathe inxaxheba kwi utyelelo eRhodes, ngo-1522, kunye UJuan Boscan, apho wayengumhlobo olungileyo. Ngo-1523 wachongwa Knight of Santiago yaye, kwiminyaka embalwa kamva wafudukela Carlos I ukuya Bologna apho wathweswa isithsaba sokuba ngumlawuli.
Uhlupheke ekuthinjweni emva koko waya Naples, apho yahlala khona. Nangona kunjalo, kuhlaselo lwenqaba yaseMuy, eProvence yaseFrance, yayinjalo wenzakele ngokufa emfazweni. Emva kokudluliselwa kwi Intle usweleke apho ngemini efana nanamhlanje 1536.
Umsebenzi wakhe omncinci ogciniweyo, ubhaliwe kwi-1526 y 1535, yapapashwa ngendlela emva kokufa kunye naleyo kaJuan Boscán phantsi kwesihloko esithi Imisebenzi yaseBoscán kunye neGarcilaso de la Vega. Le ncwadi isungule i Ukuhlaziywa koNcwadi kwiileta zaseSpain. Impembelelo yeembongi zase-Itali kunye neemetrikhi zinokubonwa ngokuvulekileyo kuwo wonke umsebenzi wakhe kwaye uGarcilaso wazilungelelanisa nemitha yeCastilian eneziphumo ezihle kakhulu.
Ngokomxholo, uninzi lwemibongo yakhe lubonakalisa uthando olukhulu Garcilaso kwinenekazi lasePortugal Elisabeth freyre. Wadibana naye enkundleni ngo-1526 kwaye ukusweleka kwakhe ngo-1533 kwamchaphazela ngokunzulu.
Ndikhetha ezi 5 iisonethi kwabangama-40 ababhalayo, ukongeza I-3 eclogues.
I-Sonnet V-Isimbo sakho sibhaliwe emphefumlweni wam
Isenzo sakho sibhaliwe emphefumlweni wam,
kwaye ndifuna ukubhala malunga nani;
ubhale wedwa, ndiyifundile
ke ndedwa, kangangokuba nakuni ndizigcine kule nto.
Kule nto ndikuyo kwaye ndiya kuhlala ndibakho;
ukuba nangona kungalingani kum indlela endibona ngayo kuwe,
Ndicinga kakhulu ukuba andiqondi
Sele uthathe ukholo kuhlahlo-lwabiwo mali.
Mna andizalwanga ngaphandle kokukuthanda;
Umphefumlo wam ukunqumle ndaya kwinqanaba lawo;
kumkhwa womphefumlo ngokwawo ndiyakuthanda.
Kuninzi kangakanani endikuvumayo ukuba ndinetyala kuwe;
Ndizalelwe wena, ndibubomi kuwe,
Ndiya kufa ngenxa yakho, ndifela wena.
I-Sonnet XIII-Iingalo zikaDaphne zazisele zikhula
Iingalo zikaDaphne zazisele zikhula,
kwaye wazibonakalisa ngeentyatyambo ezinde ezijikelezileyo;
kumagqabi aluhlaza ndabona ukuba aba
iinwele ezimnyama zegolide.
Ngamaxolo arhabaxa bagquma
imilenze yethenda, esabilayo, yayi:
iinyawo ezimhlophe emhlabeni zaguqa phantsi,
kwaye bajika baba ziingcambu ezigoso.
Lowo wayengunobangela womonakalo onjalo,
ngenxa yokulila, ndakhula
lomthi unkcenkceshele iinyembezi.
Owu lusizi! Owu ubungakanani obubi!
Oko ngokulila kukhula yonke imihla
Unobangela kunye nesizathu sokukhala kwakhe!
Sonnet IX - Mfazi wam, ukuba andikho kuwe ...
Mfazi wam, ukuba andikho kuwe
kobu bomi bunzima kwaye andifi,
kubonakala kum ukuba ndiyakhubekisa into endiyithandayo,
kwaye kulunge ukuba wayekunandipha ukubakho;
emva kwalonto ndiziva enye ingozi,
Oko kukubona ukuba ndiphelelwe lithemba ngobomi,
Ndiphulukana nokulunga endinethemba lakho kuwe;
Kwaye ke ndihamba ngendlela endiziva ngokwahlukileyo.
Kule umahluko izivamvo zam
bakho, xa ungekho kwaye unenkani,
Andisazi ukuba ndenzeni ngobungakanani obungaka.
Andizange ndibonane ngaphandle kokungavisisani;
bobugcisa obunjalo balwa ubusuku nemini,
ukuba bayavumelana kuphela ngomonakalo wam.
I-Sonnet VII-Ngubani ophulukene kakhulu nokuphulukana ...
Ungalahleki ngakumbi ngubani olahlekelwe kakhulu,
kwanele, uthando, kwenzeka ntoni kum;
kulungile kum, andikaze ndizame
undikhusele kule nto ubuyifuna.
Indlu yakho nendlu yayo endiyinxibileyo
zeempahla zam ezimanzi kwaye zihonjisiwe,
njengoko kusenzeka kulowo sele ebalekile
Ndikhululekile kwisaqhwithi endibonwe kuso
Ndifungile ukuba andisayi kuphinda ndingene kwakhona,
ngamandla am kunye nemvume yam,
kwenye ingozi enjalo, lilize.
Kodwa okuzayo ngekhe ndikwazi ukukusebenzisa;
kwaye ngako oku andiphikisani nesifungo;
ayifani nezinye okanye isesandleni sam.
I-Sonnet XIV-Njengomama onethenda, ukuba ukubandezeleka ...
Njengomama onethenda, ukubandezeleka
Unyana umbuza ngenyembezi
into, apho ukutya
Uyazi ukuba ububi abuvayo buyagoba,
kwaye uthando oluthandekayo alumvumeli
thatha ingqalelo umonakalo owenzayo
into ayicelayo ukuba ayenze, uyabaleka,
Kholisa ukukhala kwaye uyiphindaphinde ingozi,
ngokokucinga kwam kokugula nokuphambana
ukuba kumonakalo wakhe undibuza, ndingathanda
susa olu londolozo lubulalayo.
Kodwa ndibuze ndilile yonke imihla
kakhulu kangangokuba ndiyavuma ukuba ufuna kangakanani,
ukulibala ithamsanqa labo kwanam.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Imibongo » IGarcilaso de la Vega. Iimpawu zakhe ezi-5 zokumkhumbula
I-Planeta Award 2018: Sityhila iyelenqe lomsebenzi wokugqibela.